ထားဝယ်အထူးစက်မှုဇုန်မှာ သင်တို့ကိုမလိုတော့ဘူးလို့ တရားဝင်စာပို့ကာ ထိုင်းဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကို ဖယ်ရှားထုတ်ပါယ်လိုက်တဲ့ မြန်မာအစိုးရ
a fella | 14/01/2021 | News | No Comments
အီတလီယံထိုင်းကုမ္ပဏီဟာ ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲကြောင့် ပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်း အချိန်မီပြီးအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့လို့ မြန်မာအစိုးရဟာ ဗျူဟာပြောင်းအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စနစ်သစ်အရ မြန်မာအစိုးရဟာ ထိုင်း၊ ဂျပန်အစိုးရတွေနဲ့ ပူးပေါင်းကာ နိုင်ငံတော်အဆင့် အကောင်အထည်ဖော်တော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရင်လေလွင့်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို ပြန်ကာမိစေဖို့ရာ Phase-1 &2ကို တစ်ခုပြီးမှတစ်ခု မလုပ်တော့ဘဲ တပြိုင်နက်ဖော်ဆောင်သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၃၀ မှာ ကရင်ပြည်နယ်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် လုပ်သွားမယ်လို့ အမေစုက ဒီကနေ့ပြောခဲ့တာ အလကားမဟုတ်ပါဘူး။ ထိုင်းနယ်စပ်ဒေသဖြစ်တဲ့ ကရင်၊ မွန်နဲ့ တနင်္သာရီတို့ဟာ ဦးစားပေးနေရာတွေဖြစ်လာကာ မြန်မာ့စီးပွါးရေးဦးမော့လာစေဖို့အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုပါလိမ့်မည်။ 👍
Ref: Nekkei Asia
CRD_Zin Min Nyein
ထားဝယျအထူးစကျမှုဇုနျမှာ သငျတို့ကိုမလိုတော့ဘူးလို့ တရားဝငျစာပို့ကာ ထိုငျးဆောကျလုပျရေးကုမ်ပဏီကို ဖယျရှားထုတျပါယျလိုကျတဲ့ မွနျမာအစိုးရ
အီတလီယံထိုငျးကုမ်ပဏီဟာ ငှရေေးကွေးရေးအခကျအခဲကွောငျ့ ပေးထားတဲ့ကတိအတိုငျး အခြိနျမီပွီးအောငျမလုပျနိုငျခဲ့လို့ မွနျမာအစိုးရဟာ ဗြူဟာပွောငျးအကောငျအထညျဖျောဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
စနဈသဈအရ မွနျမာအစိုးရဟာ ထိုငျး၊ ဂပြနျအစိုးရတှနေဲ့ ပူးပေါငျးကာ နိုငျငံတျောအဆငျ့ အကောငျအထညျဖျောတော့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ။ အရငျလလှေငျ့ခဲ့တဲ့အခြိနျတှကေို ပွနျကာမိစဖေို့ရာ Phase-1 &2ကို တဈခုပွီးမှတဈခု မလုပျတော့ဘဲ တပွိုငျနကျဖျောဆောငျသှားမှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
၂၀၃၀ မှာ ကရငျပွညျနယျကို ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျအောငျ လုပျသှားမယျလို့ အမစေုက ဒီကနပွေ့ောခဲ့တာ အလကားမဟုတျပါဘူး။ ထိုငျးနယျစပျဒသေဖွဈတဲ့ ကရငျ၊ မှနျနဲ့ တနင်ျသာရီတို့ဟာ ဦးစားပေးနရောတှဖွေဈလာကာ မွနျမာ့စီးပှါးရေးဦးမော့လာစဖေို့အတှကျ မြားစှာအထောကျအကူပွုပါလိမျ့မညျ။ 👍
နူကလီးယားကုဒ်တွေ ပါဝင်တဲ့အိတ်ကို ဆေးရုံတက်စဉ် တစ်ပါတည်းယူသွားတဲ့ထရမ့် ( ပရိုတိုကောအရ အိတ်ကို ယူသွားတာလား ကြိုတင်ကြံစည်မူကြီးလား . )
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ တော်တော်များများမှာ တွေ့ရတဲ့စစ်ဗျူဟာ အခင်းအကျင်းတစ်ခု
တောင်တန်းသာသနာပြုဆရာတော်ကြီး ဦးဥတ္တမသာရမိန့်တတော်မူတဲ ပန်းနာရင်ကျပ်အမြစ်ပြတ်ဆေး
ဇနီးဖြစ်သူကပို့လိုက်တဲ့ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကြောင့် ကွာရှင်းခွင့်တောင်းခဲ့တဲ့ယောကျာ်း ( လွယ်တော့မလွယ်ဘူး သေချာဖြဲရှာတတ်ရတာပေါ့….)
အဆိုးဆုံးသော ရောဂါဝေဒနာတခုဖြစ်တဲ့ ကင်ဆာရောဂါကို အံတုရင်း ထူးထူးခြားခြား မီးသွေးတွေ စားတတ်တဲ့ ယာဉ်ထိန်းရဲမေ မပပဝင်း
အရမ်းချစ်ကြတဲ့ ချစ်သူ (၂) ဦး မင်္ဂလာဆောင်ခါနီး ( ၁ ) ရက်အလိုမှာလိုအပ်တာများသွားဝယ်တဲ့ ဇနီးလောင်းရင်နာစရာအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရ
အပျိုဖော်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်၏ ဘဝအား ကယ်တင်နိုင်ခဲ့သည့် တက္ကစီယာဉ်မောင်း ( ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါသည် )
စာကို ဖတ်လို့ဆုံးတော ဝမ်းနည်းလာမိပါတယ်အားငယ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်